🥇Best Wheat Trading Brokers December 2021 | Free Pro Trading Guide!
Abarhwebi abathengisa ingqolowa baGqwesileyo ngo-2021
2 Disemba 2020 | Ukuhlaziywa: 3 Novemba 2021
Njengoko kusenokwenzeka uyazi, ingqolowa ibaluleke kakhulu kuqoqosho lwehlabathi. Ngapha koko, imveliso yaqala nge-10,000 BC kwaye ibaluleke kakhulu ngoku njengokuba yayinjalo ngelo xesha, ukuba akunjalo. Ngaphandle kwerayisi, ingqolowa sesibini kwezona zisetyenziswa kakhulu emhlabeni!
Apho kukho imfuno yorhwebo - ungabheja idola yakho esezantsi ungayithengisa. Unomdla ekuthengiseni ingqolowa ngokwakho, kodwa ungaqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Ukuba kunjalo, yufike kwiphepha lasekunene.
Kwesi sikhokelo sokurhweba ngengqolowa, siza kuhamba ngeziseko zokuthenga nokuthengisa le mveliso, kunye neengcebiso eziluncedo kunye nemibono yeqhinga. Ukugqiba ngeemetrikhi ezibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ufuna iqonga elilungileyo, sigqiba ngokuxoxa ngabarhwebi abaphambili bezorhwebo ekufuneka bebaqwalasele!
Izinto ezisisiseko zokuThengisa ingqolowa
Ukubeka ngokulula, urhwebo lwengqolowa yimeko yokuthenga nokuthengisa iasethi ngomrhwebi. Unethemba lokuyithengisa ngaphezulu kunokuba ubuhlawule kuqala, ngokwenza njalo wenze inzuzo.
Nantsi indlela esebenza ngayo, ngamafutshane:
Thatha isigqibo ngeasethi yorhwebo - kule meko ingqolowa
Cacisa ukuba uyakholelwa na ukuba ixabiso lengqolowa liza kunyuka okanye lisezantsi kunangoku.
Faka iodolo kumthengisi wakho - oku kubaxelela indawo yakho
Uqikelelo lwesimo sezulu ngokuchanekileyo- wenza inzuzo
Ukuqikelela ngokungachanekanga-ufumana ilahleko kurhwebo
Ngabantu abaninzi kunanini na ngaphambili abanofikelelo rhoqo kunxibelelwano lwe-intanethi, uninzi lwentengiso lwenziwa kwi-Intanethi kwezi ntsuku. Ngaphaya koko, isabelo sengonyama sabathengisi bengqolowa bathanda ukwenza njalo okwexeshana elifutshane njenge urhwebo usuku or scalping.
Zombini i-scalping kunye nokuthengisa kwemini yingqolowa yexeshana izicwangciso zorhwebo
Izikere zokurhweba ngengqolowa zivame ukuvala izithuba kwimizuzwana okanye imizuzu
Abathengisi bemini yengqolowa bahlala bevula kwaye bevala urhwebo kwangolo suku lunye
Ukuba uthanda ngakumbi isicwangciso esifutshane ukuya esiphakathi, unokufuna ukuya Ukuguqula ukurhweba ingqolowa endaweni yoko. Kwabo abangaziyo, siza kuzicacisa ezi zicwangciso ngakumbi kamva.
Yintoni eqhuba iindleko zeNgqolowa?
Ibango lengqolowa lihlala likhula, kunye nokwanda kwabemi behlabathi. Le mveliso isetyenziswa ikakhulu kwimizi-mveliso nakwimveliso yokutya kwaye ithengiswa ngomlinganiselo omkhulu, yonke imihla.
Eyona nto iphambili kwiindleko zengqolowa, nayo nayiphi na enye i-asethi eyimali, kukubonelela kunye nemfuno.
Ke, yintoni eqhuba unikezelo kunye nemfuno xa kufikwa kurhwebo lwengqolowa?
Kukho izinto ezahlukeneyo ezinokuchaphazela ukubonelelwa kunye nokufunwa kwengqolowa, ezinje ngokutshintsha kwemozulu, imigaqo-nkqubo yezolimo kurhulumente, ukwanda kweendleko zamandla, kunye nokusilela okanye intabalala yemveliso.
Ukuba ingqolowa ingena kumhlaba ogqithileyo, ke ukulungiswa kweemarike kunokwenzeka- kwaye ke umdaniso wokuvuya uyaqala kwakhona. Umgaqo oqhelekileyo wobhontsi kukuba xa ubonelelo lwengqolowa luphezulu kakhulu, ixabiso liya kwehla. Oku kwenza indlela yokuba ibango liphinde lenyuke ngenxa yeendleko eziphantsi.
Ngexesha elithile, ibango eliphezulu elikhankanyiweyo liya kunyanzela unikezelo lweasethi ukuba lwehle. Kwelinye icala, ixabiso lengqolowa kufuneka lenyuke. Uluvo lokuba ngaxa lithile unikezelo kunye nemfuno ziya kufikelela kumhlaba ofanayo, uhlobo oluthile lokulingana!
Libalwa njani ixabiso leNgqolowa?
Ngokwemali, ingqolowa ithanda ukucatshulwa kwiidola zaseMelika ngabarhwebi. Ngelishwa, i-USD yeyona mali inamandla emhlabeni, kwaye ixabiso layo lihlala liqhuba iindleko zengqolowa.
Xa kufikwa kurhwebo, ingqolowa ibalwa ebushelini- nganye nganye inezigidi eziziinkozo okanye iiponti ezingama-60 zengqolowa.
Njengoko besesitshilo, amaqonga orhwebo ahlala ebonisa amaxabiso ezinto kwiidola zaseMelika. Ke ngoko, kusengqiqweni ukuyisebenzisa njengenxalenye yemali ebhentshini xa kuthengiswa ioyile, igolide, isilivere, irhasi yendalo, kunye nengqolowa.
Ukuba umrhwebi wakho usebenza kwiidola zaseMelika, kodwa uhlala e-Australia okanye e-India umzekelo-iqonga lakho lokurhweba liya kuhlala liguqula imali yakho, ngentlawulo encinci yokutshintshiselana. Oku kuthetha ukuba akunamsebenzi nokuba uhlala phi, ungaqala ukurhweba ingqolowa kwangoko.
Ivula nini iMarike yeNgqolowa yaMazwe ngaMazwe?
Ngemimiselo yokuba nini ungathengisa ngemini, ngemini, ingqolowa ithengiswa ngotshintshiselwano oluninzi, konke oku kuyenzeka - okuthetha ukuba ungathengisa le mveliso nge-24/7 ngokusebenzisa uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi.
Nalu uluhlu lwezinye zotshintshiselwano ekuthengiswa kuzo ingqolowa:
ILondon yeLizwe yeHlabathi yezeMali kunye noTshintshiselwano loKhetho (LIFFE)
Utshintshiselwano lweMithombo yeMinneapolis (MGE)
Utshintsho lweSydney Futures (SFE)
Utshintshiselwano lweRhwebo lweBudapest (BCE)
IBhodi yezoRhwebo yaseKansas (KCBT)
NgeMatshi ukuya eTerme International de France (MATIF)
IMercado yiTémos de Buenos Aires (MAT)
Utshintshiselwano lweempahla zaseWinnipeg (WCE)
Njengoko ngokungathandabuzekiyo uyazi, bonke abathengisi bayohluka ngokwento abanokuyinikela. Ukuba kukho intengiso ethile ofuna ukufikelela kuyo kurhwebo lwengqolowa, soloko uqinisekisa iqonga lakho lokukhetha elikunika lona ngaphambi kokuba ubhalise.
Ndingayithengisa njani ingqolowa?
Sikuxelele ukuba ixabiswa kwaye ibalwe njani ingqolowa, ke ngoku makhe sijonge iindlela ezininzi onokuthi uthengise ngazo le mveliso iluncedo ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho.
Ukuthengisa Ingqolowa: IiCFDs
Enye yeendlela ezaziwayo zokurhweba ingqolowa nge-CFDs (Izivumelwano zoMmahluko). I-CFD iya kuba sisivumelwano phakathi kwakho kunye neqonga lokurhweba ongena kulo. Konke okufuneka ukwenze kukuzama ukuqikelela isikhokelo sexabiso lexabiso lemarike kwinto yexesha elifutshane.
Esinye sezibonelelo zokurhweba ngeCFD kukuba awunyanzelekanga ukuba ube ngumnini weasethi ephantsi. Kananjalo, awunyanzelekanga ukuba uthathe uhambiso, kwaye ugcine iibhasikithi zengqolowa endlwini yakho!
Endaweni yoko, i-CFD ilandelela nje ukuhla kwexabiso lokwenyani leasethi ekuthethwa ngayo. Njengoko besitshilo, kuya kufuneka ucinge ngokuhamba kwamaxabiso exeshana elifutshane.
Makhe sijonge ngokukhawuleza ukuba indawo yeCFD yengqolowa iya kudlala njani:
Kule meko, iBhodi yeChicago yezoRhwebo (i-CBOT) yexabiso lokulinganisa ingqolowa kwi $ 6.0220 kwibhasi nganye
Ingqolowa enye ye-CFD iqulethe i-1 bushels yiyo loo nto $ 100
Ixabiso lengqolowa lenyuka laya kwi- $ 6.0663- ixabiso lenyuke nge-2.28%
Kananjalo, ingqolowa yakho yeCFD inyukela kwi-606.63 yeedola- nayo inyuka nge-2.28%
Kuyafana nokuba ixabiso liyenyuka okanye liwe-i-CFD yakho iya kutshintsha, kunye nexabiso lobomi bokwenyani
Ngokubanzi, kuya kufuneka ufumanise ukuba uninzi lwabarhwebi beCFD baya kukunceda urhwebe ingqolowa nge-0% yekhomishini, okanye amaxabiso asezantsi kuloo nto. Ngokwesiqhelo, ukuba uhlala e-UK, eYurophu, okanye e-Australia (ukusukela ngo-Epreli 2021) -usebenzisa umyinge wokuya kuthi ga kwi-1: 10 kwii-CFD zengqolowa.
Kulabo abangaziyo, oku kuthetha ukuba ukurhweba nge- $ 1,000 kufuneka ubeke umngcipheko kwi- $ 100 kwiakhawunti yakho yorhwebo. Inkampani yomrhwebi ibeka yonke intsalela- ngokuthelekiswa 'nekhredithi'.
Ngenxa yokucaciswa, makhe sijonge omnye umzekelo osebenzayo wentengiso yeCFD yengqolowa:
Umrhwebi wakho ucaphula ii-CFD zengqolowa kwi $ 605.00
Ucinga ukuba ixabiso liza kuwa phantsi kwe- $ 605.00
Kananjalo, ubeka i $ 2,000 yokuthengisa iodolo
Ixabiso lihla nge-3.2% -thetha ukuba uqikelele ngokuchanekileyo
Ukusuka kwi-odolo yakho yokuthengisa ye- $ 2,000- wenze ingeniso ye- $ 64
Ngakolunye uhlangothi, ukuba usebenzise umyinge we-1: 10 kolu rhwebo lwengqolowa-ngewawuzuze i-640 yeedola endaweni yoko. Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka usoloko ucinga ngento yokuba amandla okunyusa ingeniso kunye nelahleko-ke nyathela ngononophelo.
Ukuba ungumhlali wase-USA, ngekhe ubenakho ukufikelela kwi-CFDs njengoko zingavumelekanga kwiRhwebo Urhwebo lwexesha elizayo IKhomishini (i-CFTC) okanye iKhomishini yoKhuseleko noTshintshiselwano (i-SEC).
Ukuba umrhwebi ukunika i-CFDs njengeMelika, kungcono ukubanika indawo ebanzi, njengoko bengaphendulwanga ngumbutho olawulwa ngurhulumente.
Ukuthengisa Ingqolowa: Khetha
Ingqolowa 'ukhetho' lolunye uhlobo lokurhweba apho unokwenza khona inzuzo kukunyuka nokuhla kwexabiso leasethi.
Umahluko ophambili apha kukuba iikhontrakthi zokhetho zihlala ziza nomhla wokuphelelwa- zihlala ziinyanga ezi-3 kwinto nganye. Kuya kufuneka ucinge ngokunyuka okanye ukuhla kwexabiso lengqolowa- ngaphambi kokuba umhla wokuphelelwa ufike.
Ngokungafaniyo nezinye iindlela ezininzi zokuthengisa ingqolowa, apho kuthenga kwaye thengisa ii-odolo zenze uqikelelo lwakho kunye nomrhwebi wakho okwi-Intanethi -odolo olubekwe xa usebenzisa ukhetho iifowuni kwaye ubeka, ngokulandelanayo.
Masikukhanyisele ngakumbi ngengqolowa iinketho ngomzekelo okhawulezayo:
Uziva ngathi ingqolowa izakonyuka ngaphezulu kwexabiso langoku
Kananjalo, uyathenga umnxeba ukhetho kunye nexesha lokuphelelwa lixesha leenyanga ezi-3
Ixabiso 'lesiteleka' kwesi sikhundla yi- $ 602.20
Uhlawula umrhwebi wakho 'i-premium' yokubonelela ukufikelela kwimarike- le yi-2.5% yexabiso lesitrayikhi
'Ipremiyamu' ekufuneka ihlawulwe kumrhwebi yi- $ 15.05
Ukuba ixabiso lengqolowa lingaphaya kwexabiso lesitrayikhi-ungathenga i-asethi ngelo xabiso
Ukuba ikhontrakthi ifikelele kumhla wokuphelelwa kwayo exabisa i-650.00 yeedola, ngewawenze inzuzo enkulu ye- $ 47.80 kwisivumelwano ngasinye ($ 650- $ 602.20 yexabiso lesitrayikhi). Ewe, kunjalo, kufuneka kwakhona uthabathe ipremiyamu yokuqala oyihlawule kwinzuzo yakho yonke ukuze ufumane inzuzo yakho ebonakalayo.
Kwelinye icala, ukuba ixabiso lengqolowa alidlulanga kwixabiso lesitrayikhi le- $ 602.20, ulahlekelwa yiprimiyamu oyihlawule nge- $ 15.05- ngesivumelwano.
Ngokuchaseneyo nalo mzekelo ungasentla, ukuba ubunokucinga ukuba ixabiso lengqolowa liza kuwela phambi kokuphela komhla wokuphelelwa kwalo - ngewuthengile Beka options endaweni yoko. Kananjalo, iinketho zokurhweba ngengqolowa zikuvumela ukuba uzuze kuzo zombini iimarike ezikhulayo neziwayo.
Ukuthengisa Ingqolowa: Ixesha elizayo
Kukho ukufana okucacileyo phakathi kwexesha elizayo lengqolowa kunye nokukhethwa kwengqolowa. Zombini zenza ukuba abathengisi bakwazi ukuzuza ngokunyuka okanye ukwehla kwexabiso leasethi, ergo - ihamba kancinci kwaye inde. Ngaphezu koko, bobabini beza nomhla wokuphelelwa lixesha.
Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nokukhetha- ukuba umhla wokuphelelwa uza uza kurhwebo lwakho lwekamva kwaye usabambe izivumelwano- unyanzelekile ukuba uzithenge okanye uzithengise.
Oku akuthethi ukuba kuya kufuneka uthathe uhambiso lweebhasile zengqolowa. Endaweni yoko, abathengisi banamhlanje abakwi-Intanethi bahlala ezi zinto ezinkozo.
Ingqolowa yexesha elizayo ihlala inika ixesha lokuphela kweenyanga ezi-3, kwaye njengoko besitshilo- emva kokuba ixesha lidlulile kufuneka uthenge okanye uthengise iasethi ngokuxhomekeke kwisibikezelo sakho. Ngale nto ithethwayo, ngaphandle kokuba ngenxa yezizathu ezithile uthengisa ngekamva lendlela yaseYurophu, unokuzothula iikhontrakthi zakho nangaliphi na ixesha ngaphambi kokuba ziphele.
Oku kubalulekile kwiinjongo zolawulo lomngcipheko kwaye kuqinisekisa ukuba unokutshixa kwiinzuzo zakho okanye unciphise ilahleko ngaphambi kokuba umhla wokuphelelwa kufike.
Olunye uphawu olwahlukileyo kwezi zivumelwano zibini zikhankanyiweyo kukuba ikontrakthi yexesha elizayo ayifuni i-premium, okuthetha ukuba ungadinga ukuba ube ne-bankroll ephezulu-okanye usebenzise amandla okwandisa ukukhutshwa kwakho kokuqala.
Ukuthengisa Ingqolowa: ii-ETFs
Iimali zokurhweba ngokutshintshiselana (ii-ETFs) yindlela elungileyo yokwahlula iphothifoliyo yakho yorhwebo, notyalo-mali oluncinci. Le ikwayindlela elungileyo yokuthenga ingqolowa ngendlela engathanga ngqo, ukutsiba ngaphaya kwemarike yekamva.
Ukugcina izinto zilula, sibeke omnye umzekelo olula, ngeli xesha lokurhweba ngengqolowa ii-ETFs:
Unomdla wokuthenga ingqolowa
Kananjalo, uthenga iWisdomTree Wheat ETF Ngomthengisi wakho okwi-Intanethi
Le ETF ilandelela iBloomberg Wheat Subindex (i "Index") kwiLondon Stock Exchange
Ngoku unokufikelela kwiinkampani zengqolowa ezinamandla emhlabeni
Ngapha koko, i-ETF yengqolowa inoxanduva lokuhamba kunye nokugcinwa kwengqolowa- ke awunakukhathazeka ngayo.
Kufanelekile ukuyothenga ngeenxa zonke xa kuziwa ekufumaneni umthengisi olungileyo wengqolowa. Sifumene ukuba abanye baya kukuvumela ukuba utyalomali kwii-ETFs ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini.
Izicwangciso ezithathu eziDumileyo zokuThengisa ingqolowa
Unomxholo wentengiso yengqolowa kwaye uzive ukulungele ukuqala ukuthelekelela kwimpahla yorhwebo ngoku? Nangona kunjalo, wSingacebisa ukuba uqale uqhelane nezicwangciso ezithandwayo ezisetyenziswa rhoqo ngabarhwebi bengqolowa kuzo zonke iiseti zezakhono.
Unoko engqondweni, jonga ezintathu zezona ndlela zaziwayo zokuthengisa ingqolowa apha ngezantsi.
Masiqale ngokurhweba ngokurhweba, esisicwangciso-qhinga sokurhweba sexesha elifutshane esixhomekeke kakhulu kuhlalutyo lobuchwephesha. Xa ujika urhwebo uzama ukuthelekelela ngempumelelo kutshintsho lwamaxabiso exeshana elifutshane lengqolowa.
Umbono kukuhamba kunye nentsingiselo ebanzi yentengiso-ke ukuba uyakholelwa umfutho womelele kwingqolowa - beka a kuthenga Umyalelo. Ukurhweba ngokurhweba kubandakanya ukubambelela kwizikhundla iintsuku, iiveki, okanye kwezinye iimeko iinyanga ngexesha.
Ukuba, emva kokwenza uhlalutyo lobuchwephesha, uyakholelwa ukuba imeko yengqolowa imalunga nokutshintsha indlela - endaweni yoko kufuneka wenze i thengisa iodolo, oko kuthetha ukuba ukhupha imali kwindawo yakho.
Emva koko, ukuqinisekisa ukuba ufumana inzuzo kwimarike esezantsi ezayo, ungabeka enye iodolo yokuthengisa. Kananjalo, eyona njongo iphambili apha kukuhlala kunye nentengiso ebanzi yengqolowa ixesha elide kangangoko kunokwenzeka!
Usenokuba uvile ngamanqanaba enkxaso okanye amanqanaba amaxabiso ngaphambili kwindawo yokuthengisa. Amanqanaba enkxaso ayilelwe ukunika abathengisi umzekeliso ocacileyo wokuchasana kunye neendawo zokuxhasa amaxabiso kwiimarike ezithile.
Ukuba uziva ngathi imeko yengqolowa isendleleni esezantsi, unokusebenzisa inqanaba lokumisa ukunqanda ixabiso ukuba lihle naliphi na indawo esezantsi kunendawo ethile.
Ngenye indlela, ungangena kwimakethi ngentla komgca wenkxaso- ngaxeshanye wenze i-odolo yelahleko engaphantsi kwalomgca. Le yindlela eluncedo yokunciphisa umngcipheko othile wesikhundla sakho.
Elinye iqhinga lokurhweba lexeshana elifutshane, eyona njongo iphambili ngokucheba ingqolowa kukwenza inzuzo encinci, rhoqo. Oku kufezekiswa ngokungena nokuphuma kwintengiso amatyeli amaninzi ngosuku olunye. Ngapha koko, isikere esinamava sihlala sibeka amakhulukhulu ezorhwebo ngosuku-ezinye zihlala ixesha elide ngaphandle kwemizuzwana embalwa!
I-Scalping iboleka kakuhle kwimarike engazinzanga-evumela abathengisi ukuba benze imali ngexabiso elincinci (yithi $ 600- $ 620) xa ithuba livela. Ukunqunyulwa kwengqolowa sisicwangciso esinomngcipheko ophantsi- ubukhulu becala kuba unokulindela ukuba i-asethi inyuke ingaphezulu kwe- $ 620 okanye iwele ngaphantsi kweedola ezingama-600 ngaxa lithile apho kunokuba njalo.
Kananjalo, kuya kufuneka ubeke i-odolo yokulahleka kokuma ngapha nangapha kuluhlu lwamaxabiso- oko kuthetha ukuba uyaqhubeka nokwenza imali kwisikhundla sakho okoko ixesha lokudibanisa likhoyo.
Iingcebiso ngokuthengisa ingqolowa
Ngoku sithethile ngendlela onokuzithengisa ngayo le mveliso, siza kunika ingqolowa evavanyiweyo iingcebiso zokuthengisa.
Emva kwayo yonke loo nto, xa ucinga ngomsebenzi omtsha wokuzonwabisa okanye ikhondo lomsebenzi kwezorhwebo, nokuba yeyiphi na le asethi inokuba yiyo - iqhinga elibaluleke kakhulu. Ngokucinga malunga neenjongo zakho zokurhweba, unokubeka isicwangciso sokukugcina ngqo kwaye umxinwa.
Isicwangciso sakho sokurhweba ngengqolowa sinokubandakanya:
Nokuba ujonge ukungena kunye nokuphuma kwintengiso imini yonke, okanye iintsuku kunye neeveki ngexesha
Umngcipheko wakho / umyinge womvuzo kwindawo nganye (isicwangciso esithandwayo ngu-1: 3)
Inani leeyure zokuchitha kuphando
Ubuncinci beeyure ngenyanga ezinikezelwe kwizixhobo zemfundo nohlalutyo lokufunda.
Funda Iincwadi Zokuthengisa Ingqolowa
Nokuba ukhetha iincwadi zamaphepha emveli, iincwadi zedijithali okanye iincwadi ezimanyelwayo- kukho incwadi emalunga nazo zonke iiklasi zeeasethi ezinokurhwebelana ngazo. Ukufunda kunokuba yindlela elungileyo yokuzazisa nangaso nasiphi na isifundo, ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho.
Ngokuchwetheza 'ezona zinto zilungileyo zokuthengisa ingqolowa kwiincwadi zokuqala' kwiinjini yokukhangela ye-intanethi, uya kubona ukuba zininzi izinto onokukhetha kuzo. Unokukhetha enye ingakumbi malunga nengqolowa, iinkozo- okanye izinto ngokubanzi.
Sincoma le yokugqibela-emva kwayo yonke loo nto, unokufuna ukwahlula iphothifoliyo yakho kamva ezantsi emgceni. Le yindlela elungileyo yokuthintela ukuvezwa kakhulu kudidi olunye lweeasethi.
Sibeke uluhlu olufutshane kwezinye zeencwadi ezithandwayo kurhwebo lwezinto:
Izinto ezishushu: Izinto ezenziwa nguNoma ngubani na onokuTyala imali ngeNtengiso kwiLona Rhwebo liBalaseleyo- uMbhali, uJim Rogers
Incwadi Encinci yoTyalo-mali lweeMpahla- Umbhali, uJohn Stephenson
Incwadi yokuQala yoMThengi weeMpahla: Isingeniso kwiNtengiso yeHlabathi ekhula ngokukhawuleza-Umbhali, uCarly Garner
Izixhobo zedummies-Umbhali, uAmine Bouchentouf
Ngaphaya kweencwadi, kukho intaphane yeekhosi ezahlukeneyo zorhwebo ezikhoyo kwi-intanethi, ezinye zazo zisimahla. Ayilombono mibi ukujonga umxholo wemfundo kuhlalutyo lobuchwephesha, ngelixa uzilungiselela ngolwazi oluluncedo.
Gcina ngokungahambelani neeNdaba zeNgqolowa zaMva nje
Njengoko besitshilo ngaphambilana, zininzi izinto eziqhubela phambili unikezelo kunye nemfuno, kwaye ke ixabiso, lengqolowa.
Ukukunika inkcazo ecacileyo yento ekufuneka ujonge kuyo, sidwelise ezinye zezinto eziphambili ezinokuba nefuthe kurhwebo lwakho lwengqolowa:
Yonyusa okanye yehle ixabiso kwiDola yaseMelika
Iindleko zamandla aphezulu
Ukungathembeki okanye ukuthuthwa kwexabiso eliphezulu
Ukunyuka kwemali engenayo, ngakumbi kumazwe asaphuhlayo
Ukulindela ixabiso lamafama kwingqolowa
Uxinzelelo oluvela kubatyali mali bezezimali
Izithintelo zikarhulumente okanye isitokhwe
Ukucinga ngokushokoxeka okanye ukuveliswa ngokugqithisileyo
Ukuba awunalo ixesha okanye uziva ukhathazekile, sicebisa ukuba ubhalisele inkonzo yokubhalisela iindaba-ejolise ikakhulu kubarhwebi. Nge-imeyile okanye iselfowuni, aba baboneleli bathumela iindaba zoqoqosho kunye nezezezimali zakutshanje. Oku kufanelekile kwimpahla oyikhethele ukwenza imali kuyo-ke kule meko ingqolowa.
Sebenzisa imiqondiso yokuthengisa ingqolowa
Ukuba unokwenza ngoncedo oluncinci ngokubhekisele kwintengiso yengqolowa- kutheni ungazami inkonzo yomqondiso wokuthengisa ingqolowa. Ayigcinelwanga i-newbies kuphela, ababoneleli ngeempawu bakwanika uninzi lwabarhwebi abangenalo ixesha elaneleyo lokwenza uhlalutyo olwaneleyo.
Yintoni kanye kanye umqondiso wokuthengisa ingqolowa? Ewe, umqondiso ngokuyintloko sisaziso esenziwe ngeengcebiso zorhwebo ezinje ngokuthenga okanye ukuthengisa iiasethi (ingqolowa), kunye 'nokwenza inzuzo' kunye 'nokuyeka ukulahleka' kweziphakamiso.
Akukho odolo iya kwenziwa egameni lakho, ke le miqondiso ziingcebiso ngokulula- zonke onokukhetha ukuzityeshela, okanye uqaphele kwaye wenze iodolo nomthengisi wakho.
Thina kuFunda u-2 Urhwebo besibonelela ngemiqondiso yokurhweba kwindawo ekwi-intanethi iminyaka eliqela ngoku-nangaphezulu kwama-5,000 amalungu athembekileyo kwiqela lethu leTelegram. Ubuninzi beempawu zethu zorhwebo zisekwe kwiintshukumo ze-forex kunye ne-cryptocurrency, nangona kunjalo, sikwanika izinto ezifana nengqolowa amaxesha ngamaxesha.
Kuya kufuneka siqale ngokuthi ayinguye wonke umrhwebi okwi-Intanethi oya kuthi abonelele ngeKopi yoMrhwebi. Kwabo abangaziyo, eli nqaku likuvumela ukuba utyale imali kumrhwebi onerekhodi eqinisekisiweyo kwaye ukope umlinganiso wepotifoliyo yakho yokulinganisa (ngokulingana nesibonda sakho).
Unokukhetha uKhuphela uMrhwebi ngokusekwe kwiimethrikhi ezinje ngempumelelo yezorhwebo, inqanaba lomngcipheko, kunye nodidi lweeasethi ezikhethiweyo. Akuyi kuba nguwe kuphela umrhwebi okopisha ipro, njengoko abaKhupheli baRhwebi ngokungaqhelekanga banamakhulu abanye nabo batyale imali kubo-kunye nokusebenzisa imali yabo.
Ukucacisa, ukuba babeke emngciphekweni i-1.6% yeepotifoliyo zabo kwingqolowa kunye ne-0.4% kwirhasi yendalo-ipotifoliyo yakho yorhwebo iyakubonisa esi sabelo se-2%. I-eToro, umzekelo, ibonelela ngale khomishini yasimahla, kunye notyalo-mali oluncinci kwiKopi yoMrhwebi kwi- $ 200 nje.
Ingqolowa yoRhwebo neMali yePhepha
Ukurhweba ingqolowa ngemali yamaphepha ayisiyonto yokujika impumlo yakho. Nokuba abathengisi bengqolowa abanamava eminyaka basebenzisa iiakhawunti zedemo. Yindlela ebalaseleyo yokufunda iimarike kwaye uzame iindlela ezintsha zokurhweba.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa unokuziqhelanisa nezakhono zokufunda itshathi yamaxabiso, kwaye ngokuxhomekeke kwiqonga lokurhweba, tshintsha phakathi kweakhawunti yedemo kunye neakhawunti yokwenyani xa uziva ulungile.
Ezona akhawunti zedemo zibonakalisa iimeko zentengiso zehlabathi zangempela, zisenza ukuba kube lula ukungena kwizakhono zokuthengisa ingqolowa ngaphandle kokuchitha isenti.
Iimpawu eziphambili: Ukufumana uMrhwebi oRhwebo oLungileyo weeNgqolowa
Okwangoku kwesona sikhokelo sishishinayo sengqolowa, mhlawumbi unomdla wokuqala ukurhweba ngale mveliso ithandwayo kwi-Intanethi.
Nangona kunjalo, njengoko besitshilo ngaphambili, unokufumana ukufikelela kwiimarike zengqolowa ngomthengisi. Ngamaqonga orhwebo amahle, amabi kwaye amabi kwisithuba, kunokuba nzima ukubona ihlathi lemithi.
Kananjalo nokudwelisa iiarhente ezine esizithandayo zokurhweba ngengqolowa ukuya ezantsi- siqokelele uluhlu lwezinto ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha ukubhalisa. Oku kukuvumela ukuba ufumane umrhwebi wengqolowa othengisa iipesenti eziyi-100 kwiinjongo zakho zemali.
Sicinga ukuba ukukhetha umrhwebi wengqolowa olawulwa ngokupheleleyo kubaluleke kakhulu. Njengokuba sichukumisile, kukho amakhulu wabarhwebi phaya, ezinye zikhulu, kodwa kunye neemfumba zookrebe nazo.
Izinto zokurhweba, okanye nayiphi na i-asethi, inokuba ngumdlalo oyingozi. Kananjalo, qiniseka ukuba uqala ngonyawo lwasekunene ngokunika imali yakho kuphela inkampani enelayisensi kunye nehloniphekileyo yokuthengisa.
Awona mabhunga aziwayo kwindawo yokuthengisa ingqolowa kubandakanya i-FCA (UK), ASIC (Australia), CFTC (USA), kunye neCySEC (Cyprus). Zikhona ukwenza ukuba urhwebo lwezixhobo zemali lukhuseleke kwaye lubengcono kubo bonke ababandakanyekayo.
Amaqonga ezorhwebo aneelayisensi kufuneka alandele imigaqo engqongqo eyahlukeneyo. Oku kubandakanya ukukhuthala ngenxa yabathengi, ukugcina imali yakho yorhwebo kwiakhawunti eyahlukileyo, kunye nokungenisa uphicotho rhoqo.
Imirhumo yokuThengisa ingqolowa
Emngciphekweni wokuchaza umrhumo ocacileyo wentengiso yengqolowa unokutya ngokwenene kwiinzuzo zakho ukuba awuqapheli. Oku kunjalo ngakumbi ukuba ubhalisela ukungaboni, kwaye ezi ntlawulo ziyakunyukela emva kokuzibophelela eqongeni.
Wonke umrhwebi othengisa ngengqolowa uya kubiza iifizi ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ukukunika umbono ocacileyo wento onokuyilindela, sidwelise ezona ziqhelekileyo apha ngezantsi.
Imali ebalulekileyo yokurhweba ngengqolowa ekufuneka uyijongile kumrhwebi omkhethileyo yile yekhomishini. Le yintlawulo ehlawulwayo ngalo lonke ixesha ubeka ukuthenga nokuthengisa iodolo.
Umzekelo, masithi ubeka i-odolo yokuthenga engange- $ 1,000 kwingqolowa- kwaye umrhwebi ubiza ikhomishini ye-0.5%. Ngaloo ndlela, ikhomishini yakho iya kuba yi- $ 5. Ke, ukuba ukhupha imali kwindawo yakho yokuthengisa ingqolowa xa ixabisa i-1,300 yeedola- uya kuphinda uhlawule ikhomishini ye-0.5 %- okanye i-6.50 yeedola.
Uninzi lweendawo zokurhweba esizicebisayo zikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise ingqolowa ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini. Endaweni yokuba yonke into yakhelwe kwifayile ye- sasaza - esiyigubungela kungekudala.
Ukutshintshisa imirhumo, ukutshintsha inzala, okanye iifizi zobusuku ngobusuku zizinto ezifanayo - umrhumo ubizwa abanye abathengisi bengqolowa ngokugcina izikhundla zivulekile ubusuku bonke.
Oku kuhlala kusebenza kuthengiso olwenziweyo, ke iyafana nomdla wokugcina indawo yakho ivulekile ngaphandle kweeyure zentengiso. Intlawulo ihlawulwa yonke imihla, ihlala inezinga eliphezulu elithe kratya liyasebenza ngeempelaveki.
Nangona amaxabiso ezemali ubusuku bonke ephantsi kwizikhundla zengqolowa, ukuba ubugcina urhwebo lwakho luvulekile iiveki ngexesha, ezi ntlawulo zinokongeza kungekudala.
Kwakhona, ayinguye wonke umthengisi oza kuyidinga le mali. Kodwa, kulungile ukuba wazi ngayo nayiphi na into ephumayo kuyo nayiphi na into entsha ebandakanya imali. Amanye amaqonga okurhweba ngengqolowa aya kuqala ukubiza umrhumo wenyanga (i-10 yeedola umzekelo) emva kwexesha elichaziweyo lokungasebenzi.
Kananjalo, le ntlawulo ihlawuliswa ngokuzenzekelayo xa ungakhange ubeke imali kwiakhawunti yakho okanye wenze nayiphi na iodolo okwethutyana.
Sifumana ixesha elibekiweyo liinyanga ezili-12, kodwa hlala ufunda imigaqo kunye neemeko njengoko ezi ntlawulo zenyanga zinokuyicoca iakhawunti yakho ukuba awalumkanga.
Imirhumo yokufaka kunye nedipozithi
Uninzi lweefemu zabarhwebi ezikwi-Intanethi azihlawulisi ngedipozithi kunye nokurhoxa kwezi ntsuku. Nangona kunjalo, unokufumana intlawulo encinci yokusebenzisa iindlela ezithile zokuhlawula, ngelixa ezinye iindawo zokurhweba ngengqolowa ziya kuhlawulisa izicelo zokurhoxa ezincinci.
Eyona meko intle kukuba umrhumo kuphela ekufuneka uhlawule wona wokuxhasa iakhawunti yakho yimali yokuguqula imali. Ukukunika umzekelo, unokufumana intlawulo yokuguqulwa kwemali ye-0.5% ukuba awusebenzisi iidola zaseMelika. Kwelinye icala, amanye amaqonga orhwebo amkela iimali ezahlukeneyo.
Ukuhamba kwiplatifti kubaluleke ngakumbi kunabantu abayinika ikhredithi, ngakumbi ii-newbies. Ungaphazama ngokucinga ukuba ngakumbi umrhwebi kwiwebhusayithi yakhe ungcono. Kodwa, ngokuchaseneyo, oku kunokuba nzima nangakumbi kwimicimbi.
Ukufumana i-asethi ofuna ukuyithengisa, kunye nokukhetha ukwenza iodolo kufuneka kwenziwe kube lula kuwe-uyilo olusebenziseka lula kwiwebhusayithi yomrhwebi wengqolowa.
Emva kwayo yonke loo nto, akukho nto ingako ekukhetheni iqonga lokurhweba nazo zonke iintsimbi kunye neempempe, ezipakishwe kumanqwanqwa ngeetshathi ukuba awuziqondi iziseko ezingenanto zentsingiselo yazo!
Endaweni yoko, kuyacetyiswa ukuba ukhethe indawo yokuthengisa ingqolowa efanelekileyo kubantu zonke amanqanaba ezakhono. Ngokwe-technical and basic analysis, ungasoloko usebenzisa iqonga lesithathu nokuba kunjalo.
Ukuba kukho indlela ethile yokuhlawula ekufuneka uyisebenzisile, umzekelo, iVisa-jonga ukuba iqonga lokurhweba liyayamkela ukusuka nokuhamba.
Ngokwesiqhelo uya kufumanisa ukuba abathengisi bengqolowa bamkela iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula, ezinje nge-debit / amakhadi etyala, ukuhanjiswa ngocingo, kunye ne-e-wallets njengePayPal.
Ukutshintshelwa kwentambo, nangona iyindlela ethembekileyo yokuhlawula kwi-Intanethi, inokuthatha phakathi kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 zeshishini ukubetha iakhawunti yakho yorhwebo lengqolowa. Ngokucacileyo oku kuya kulibazisa urhwebo lwakho lokuqala-ke kungcono ukhethe enye yeendlela zokuhlawula ezenziweyo kwangoko ezichazwe apha ngasentla.
Kwabo abangaziyo, ukusasazeka ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso leasethi. Ukuqina kokunwenwa kukutya / ukuthengisa amaxabiso engqolowa, kungcono kuwe njengomrhwebi.
Njengayo yonke enye into, ukusasazeka kunikezelo kuya kwahluka phakathi kwabarhwebi. Sifumene ukusasazeka okujikeleze i-0.30% xa kuthengiswa ingqolowa ukuze ikhuphisane. Musa ukulibala, ukurhweba kwengqolowa kusasazeka kunokwahluka yonke imihla kuxhomekeke kwiimeko zentengiso. Oko kukuthi, ngexesha lokungazinzi okuphezulu, ukusasazeka kunako kwaye kuyonyuka.
Abarhwebi abathengisa ingqolowa
Siveze zonke iimetriki ezibalulekileyo ekufuneka uyazi, ukuze uqale ngendlela elungileyo xa uthengisa ingqolowa kwi-Intanethi.
Sikugcinele uninzi lwemisebenzi ye-Intanethi ngokuhluza ikrimu yesityalo sabarhwebi abakwi-Intanethi. Ngokuqinisekileyo, kukho iitoni zamaqonga amakhulu okurhweba ngengqolowa phaya, kodwa njengoko besitshilo zininzi iingcuka ezambethe ufele lwegusha kolu shishino, nazo.
Ukuthathela ingqalelo oko, silwenzile mhlophe uluhlu lwethu lwabarhwebi abathengisa ingqolowa ukuya kuthi ga kwisine.
1. I-AVATrade-Ingqolowa yeCFDs kunye nokuSasazeka okuQinisekileyo
I-AvaTrade ibibonelela ngenkonzo encomekayo kubarhwebi abakwi-Intanethi ngaphezulu kweshumi leminyaka. Iqonga lokurhweba lilawulwa yimibutho emininzi yolawulo- njengaleyo iseIreland (ixhaswe ngokupheleleyo yiFCS), Canada, Australia naseJapan - ukubala nje ezimbalwa.
Ukuba unomdla ekurhwebeni ii-CFD zengqolowa, ngekhe ube mfutshane ekukhetheni kweli qonga, kwaye unokufaka isicelo ukuya kuthi ga kwi-1: 10, ngokwemiqathango ye-ESMA. Malunga nokusasazeka, i-AvaTrade ibonelela abathengi ngeedola eyi-0.002 ngaphezulu kwexabiso lemarike / ukusasazeka okungaguqukiyo. Oku kukhuphiswano kakhulu.
Unokuzama izimvo zesicwangciso usebenzisa iakhawunti yedemo yeAvaTrade yasimahla kubaxumi kwaye iza ne- $ 100,000 yemali ebonakalayo. Xa usebenzisa iakhawunti yedemo uya kuthengisa kwindawo yentengiso yokwenyani.
Ngaphaya koko, uya kuba nakho ukusebenzisa uhlalutyo lobuchwephesha, njengoko ubuya kwenza kwilizwe lokwenyani. Xa uziva ukulungele ukutshintshela kwiakhawunti yokwenyani, yongeza ezinye iimali, kwaye ubeke iodolo yakho.
Ukuba ufumanisa ukuba ungaphandle komdlalo wokurhweba okwethutyana, khumbula umrhumo wokungasebenzi ohlawulwa emva kweenyanga ezi-3 zokungathengisi ngokusebenzayo. Oku kuhlawuliswa kwi- $ 50 ngenyanga emva koko, kwaye iya kuthathwa kwi-akhawunti yakho yorhwebo ngokuzenzekelayo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kukho umrhumo wolawulo we- $ 100.
Kwakhona, ukuba uthengisa ingqolowa rhoqo, awufanelanga ukuba uchaphazeleke- kodwa kubalulekile ukuba wazi yonke imirhumo xa ukhetha umrhwebi nangona kunjalo Ubuncinci bediphozithi yokuqala ukuthengisa ingqolowa ngeAvaTrade yi- $ 100, kwaye kukho ukhetho yeendlela zokuhlawula ezamkelweyo.
Oku kubandakanya abarhanelwa abaqhelekileyo njengedebhithi / ikhadi lekhredithi, ukuhanjiswa ngocingo, iPayPal, iNeteller, kunye neSkrill. Okokugqibela, i-AvaTrade iyahambelana zombini i-MT4 kunye ne-MT5- kwaye ikwabonelela ngeqonga layo lokuthengisa kwi-Intanethi nange-mobile app.
Min idiphozithi ukusuka kwi- $ 100 nje
Ukunyuselwa kwe-1: 10 enikelwe kwii-CFD zengqolowa
Usetyenziso lwe-AvaTradeGO olusebenzayo lwe-Android / i-iPhone
Ingxelo yephepha lokuthengisa ingqolowa kuphela kwiintsuku ezingama-21
2. I-Capital.com - Ukusasazeka kweKhomishini kunye noKhuphiswano kwiKona
Inikwe ilayisenisi phantsi kweFCA, CySEC, ASIC, kunye ne-NBRB Capital.com yenye i-broker enokwenzeka ngokugqibeleleyo kwi-intanethi yeemveliso zorhwebo. Eyona nto iphambili kweli qonga yikomishini enguziro kuzo zonke ii-asethi. Unako kwakhona ukurhweba ngezinto zorhwebo kwi-leverage, kodwa iya kufakwa kwi-1:10 ngokwemida ye-ESMA.
Into oyifunayo idiphozithi encinci yeedola ezingama-20, i-euro, okanye i-GBP ngokusekwe kwindlela yakho yokuhlawula. I-Capital.com ikwabonelela ngokusasazeka kukhuphiswano kubarhwebi. Ngamanye amaxesha, ukusasazeka kunokuya ezantsi njenge-0.04% kodwa kuhlala kuhlala kwahluka kunye nentengiso.
Vula iAkhawunti kunye noMthengisi weNgqolowa ngoku
Sigubungele iziseko zokurhweba ngengqolowa kwaye sanikela ngemizekelo yoku-odola, amacebo kunye neengcebiso.
Kweli candelo lokugqibela isikhokelo sethu sokurhweba ngengqolowa, siza kuqhuba ngemizekelo yamanyathelo amathathu esiseko sendlela yokubhalisa kunye nomrhwebi wakho omkhethileyo. Ngelixa inkqubo yokubhalisa inokwahluka kwiqonga ukuya eqongeni-ibali lihlala lisondele ngokwaneleyo.
Inyathelo lokuqala-Bhalisela ukurhweba ngengqolowa
Ke, uthathe isigqibo sokuba leliphi iqonga lokurhweba ofuna ukulisebenzisa. Yiya kwiphepha lewebhu elisemthethweni kwaye ujonge iqhosha 'lokungena' / ikhonkco-elihlala lenziwa ukuba livelele kubathengi abatsha.
Ukuhla kwesiqhelo xa usayina kumrhwebi othengisa ingqolowa ngolu hlobo lulandelayo:
Faka igama elipheleleyo, idilesi, idilesi ye-imeyile, kunye nenombolo yeselfowuni
Xa ukhuthazwa-layisha ikopi yesazisi sefoto esifana nepasipoti okanye ilayisensi yokuqhuba
Emva kwexesha, usenokubuzwa imibuzo malunga nembali yakho yorhwebo kunye nemeko yezemali
Sukuba nexhala lokucelwa ukuba ubuze olo lwazi. Iqonga ngalinye lokuthengisa elilawulwayo kufuneka lihambelane nemithetho engqongqo ye-KYC (yazi umthengi wakho), ebandakanya ukuqinisekisa ubungqina bakho, kwaye kwezinye iimeko ukuba ungumthengisi onjani.
Inyathelo lesibini-Iimali zeDipozithi kwiakhawunti yakho yokuThengisa ingqolowa
Yiyo loo nto, uvule iakhawunti yakho entsha yokuthengisa ingqolowa. Oku kuhlala kuthatha imizuzu engaphantsi kweshumi.
Ngoku ungangena kwiakhawunti yakho entsha kwaye ufake imali. Isabelo sengonyama sabarhwebi abakwi-Intanethi siya kufuna idiphozithi encinci, enokuba isuka kwi-20 yeedola ukuya kwi-1,000, XNUMX yeedola.
Ukucinga ukuba sele ukhangele iqonga lokurhweba lamkela indlela yokubhatala ofuna ukuyisebenzisa-ngoku ungayikhetha kuluhlu lokuhla. Okulandelayo, faka ixabiso lemali kwaye uqinisekise ukhetho lwakho lokufaka imali kwiakhawunti yakho.
Phawula: Ukuba ufuna ukuqala ukurhweba ingqolowa kwangoko, kuthintele ukudluliselwa kwebhanki kuba oku kungathatha iintsuku ezininzi ukwenza le nkqubo. Endaweni yoko, khetha kwi-debit / kwikhadi letyala okanye kwi-e-wallet.
Inyathelo lesithathu-Beka uMyalelo wokuThengisa ingqolowa
Ngoku indawo emnandi. Unayo iakhawunti entsha egcwele iimali zorhwebo- ke ngoku kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngaba ixabiso lengqolowa liza kunyuka okanye lihle ngexabiso.
Nje ukuba isigqibo sakho senziwe, ungabeka iodolo ngeqonga lakho lokuthengisa ukuze ukhanyise indawo obuyifuna.
Njengoko besesitshilo, iiakhawunti zedemo ziyindlela elungileyo yokufunda iimarike zengqolowa kunye nokuzama nezimvo zesicwangciso- konke simahla. Ukuba umrhwebi wakho unikezela ngeakhawunti yemali yamaphepha, ungatshintshela kwiakhawunti yokwenyani nanini na xa uziva uzithemba ngokwaneleyo.
Ukuze ufumane ukuba urhwebo lwengqolowa luzama ukuya kwisiqalo esihle, kufuneka ubenolwazi olomeleleyo ngendlela esebenza ngayo imakethi. Ngombulelo, kukho ubuninzi bezixhobo ezikhoyo kwizandla zakho.
Umzekelo, ngokusebenzisa izinto ezinje ngohlalutyo lobuchwephesha rhoqo, uya kuba nakho ukuvavanya ukunyuka nokuhla kwendlela kunye nokuhamba ngamandla kwintengiso. Uluxhobile ngalo lonke olu lwazi, umi ethubeni elingcono lokuthelekelela ukunyuka okanye ukuhla kwexabiso lexesha elifutshane lengqolowa.
Ukuba unqwenela ukuya kwintengiso yengqolowa, kodwa ngendlela ethe kratya- zama iinkonzo zomqondiso, iinkonzo zokubhaliswa kweendaba, kunye neerobhothi ezizenzekelayo. Ngaphaya koko, kukho iimfumba zeencwadi zokurhweba ngengqolowa kunye nezifundo ezikwi-Intanethi ukuzisebenzisa ngokupheleleyo, uninzi lwazo lujolise kubaqalayo.
Iakhawunti yeedemo ayizukuthathelwa ingqalelo nokuba yeyiphi, ke jonga ukuziqhelanisa nokuthengisa ingqolowa usebenzisa imali yamaphepha endaweni yenkunzi yakho. Kwinqaku lokugqibela, sicebisa ukubambelela kubarhwebi abalawulwayo, ukuzikhusela kookrebe abaninzi kwindawo yokuthengisa ingqolowa.
Ndiyakwazi ukuthengisa ingqolowa kwi-intanethi?
Ewe. Akuzange kube lula ukuthengisa ingqolowa kwi-intanethi. Yonke into oyifunayo kukufumana umrhwebi olungileyo obonelela ngokufikelela kwiimarike zengqolowa ukuze akwenzele iiodolo zakho.
Ndingarhweba ngengqolowa ngemali yamaphepha?
Ewe. Ukuba iqonga lokurhweba usebenzisa iiakhawunti zedemo, unokurhweba kwimarike ebonisa imeko-bume yokuthengisa ingqolowa yokwenyani. Iakhawunti yeedemo ihlala izele inexabiso elikhulu lemali yephepha.
Ngaba ndingaxhamla ukuba ixabiso lengqolowa liyehla?
Ewe ungenza inzuzo ngokunyuka okanye ukuwa kweasethi ngokuyithengisa njengeCFD (izivumelwano zomahluko). Oku kuthetha ukuba ungahamba ixesha elide okanye elifutshane ngengqolowa - kuxhomekeke kwisibikezelo sakho.
Ndiyakwazi ukufaka amandla okurhweba ngengqolowa?
Ewe. Uninzi lwabarhwebi abathengisa ingqolowa kwi-Intanethi banikezela abathengi ngexabiso. Ukuba use-UK, Australia (ukusukela ngo-Epreli 2021), okanye i-Europe-average ifakwa ngo-1: 10 ngokwemigaqo ye-ESMA. Kubahlali base-USA, ii-CFDs ezinesixhasi zivaliwe, ngokwemiqathango ye-CTFC.
Ndingazi njani ukuba umthengisi wengqolowa uyinyani?
Eyona ndlela ilula yokujonga ukuba semthethweni kwe-broker kukuqinisekisa ukuba iqonga lokurhweba linelayisensi ngumbutho olawulayo ohlonitshwayo, njenge-ASIC, FCA, CySEC, kunye ne-NBRB (umzekelo). Iifemu zokurhweba ezinganyanisekanga azitsibi kwiihupu ezifunekayo kwilayisenisi-ukuze zingathobeli imigaqo kwaye zibeke emngciphekweni wesohlwayo esikhulu okanye esibi kakhulu.